education – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
June 21, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
ဒူးရင်းသီး (ခေါ်) Esplande နှင့် ACM (Asian Civilization Museum) ကြားတွင် Tunnel တိုတိုလေး ရှိ၏။ ပုလွေသံသဲ့သဲ့က ထိုနေရာဘက်မှ လွင့်ပျံလာနေသည်။
(ကျွန်မလည်း) Scarborough Fare စာသားတစ်ချို့ကို နှုတ်မှ ခပ်သဲ့သဲ့ လိုက်ညည်းဆိုမိရင်း သူ့ကို မိတ်ဖွဲ့သလို ပြုံးပြဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးက အာရုံစိုက်မိဟန် မပြသေး။ Tunnel ပြင်ပမှ နေ့လည် နေရောင်အောက်တွင် ACM ရှေ့ မြင်ကွင်းသည် မြစ်ရေ စိမ်းစိမ်း၊ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်း၊ သစ်ပင်ရိပ်စိမ်းစိမ်းတို့ဖြင့် အေးမြနေသည်။ သူမှုတ်နေသည့် သံစဉ် အဆုံးပိုင်းတွင် စိတ်တိုင်းမကျဟန် မျက်ခုံးတစ်ချက်တွန့်သွားပြီး ရပ်သွား၏။ ရေဗူးလေးဘေးမှ ချထားသောအိတ်ထဲတွင် ပုလွေရှည်/တို ၄ချောင်းက အခန့်သား။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပိုလိုရှပ်အဖြူတစ်ထည်နှင့် ဘောင်းဘီရှည်အနက်ရောင် ခပ်ပွပွကြောင့် နဂို ပိန်သွယ်သော အမျိုးသမီးသည် ပို၍ပင် ပါးလျသွားသည့်ဟန် ပေါ်နေသည်။ ဆံစတချို့က စည်းထားသည်မှ ပြေလျော့ကျနေသော်လည်း အာရုံစုစည်းထားမှန်း သိသာနေသော သူ့မျက်လုံး စူးစူးအတွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်မနေပါ။ Tunnel နံရံကို မှီရင်း (သူ့ကို) ငေးမောကြည့်နေသော သူ့ (ကျွန်မကို) မြင်တော့ အသိအမှတ်ပြုဟန် ပြုံးပြကာ ရေဗူးကို လှမ်းကောက်ကိုင်သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် ACM ဘက်မှ Bass သံကဲသော သံစဉ်အချို့ ပျံ့လွင့်လာသည်။
အမျိုးသမီး၏ လက်သည် ရေဗူးလေးအစား အနည်းငယ်ရှည်သွယ်သော အခြားပုလွေ တစ်ချောင်းကို ကိုင်လျက်သား ဖြစ်သွားကာ chorus ပိုဒ်များတွင် အသံဖြည့် လိုက်နေ၏။ ခပ်မြူးမြူး တေးသံစဉ်က တပိုင်းတစနှင့် ရပ်သွားသော်လည်း ပုလွေသံက ဝေ့ကာ ၀ိုက်ကာ ဆုံးသွား၏။
အမျိုးသမီးက (ကျွန်မဘက်ကို )လှည့်လိုက်ကာ `ကျွန်မ ပုလွေအမျိုးအစား တစ်မျိုးထဲပဲ ယူလာတာ။ ဒါပေမယ့် ကီး ၄ မျိုးစာပေါ့လေ။ တကယ်လို့ သူတို့ဖွင့်လိုက်တဲ့ သီချင်းသံက ဂျပ်ဇ်ဂီတဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီအမျိုးအစား မဟုတ်ဘဲ တခြားပုလွေနဲ့မှ အဆင်ပြေမှာ´- ဟု ဆိုသည်။ စိတ်လိုလက်ရ လှည့်ပြီး ရှင်းပြနေသော အမျိုးသမီးကို (ကျွန်မ) အားနာသလို ပြုံးပြရင်း `ကျွန်မက ဂီတကို နားလည်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ နားထောင်ရတာကို သဘောကျလို့ လာနားထောင်တာပါ´ဟု ပြန်ရှင်းပြလိုက်ရသည်။ အမျိုးသမီးသည် အံ့ဩသွားဟန် ရိပ်ခနဲ ပေါ်သွားသော်လည်း သဘောကျသွားဟန်လည်း ရှိသည်။
`ဩော်၊ သိပြီ။ နားထောင်တာရယ်၊ သီချင်းညည်းတာရယ်ပေါ့။ သူတို့ရဲ့ သီချင်းသံကို ကျွန်မကတော့ အဖြည့်သဘောမျိုး လိုက်လေ့ ရှိတယ်။ ကျွန်မက အဲဒီသီချင်းကို မှုတ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲဒီသံစဉ်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့်ဟာမျိုးပေါ့။ ရှင် သီချင်းတစ်ပုဒ် အစအဆုံး နားထောင်ရမယ် မထင်ဘူး။ တကယ်လို့ သူတို့က Pop သီချင်းတွေဖွင့်ခဲ့ရင်တော့ ကျွန်မအဲဒီသံစဉ်တွေကို ကောင်းကောင်း ဦးဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အမျိုးအစားမှာ Acoustic Version တွေ အမြဲတမ်း ရှိနေတတ်တယ်လေ။ သူတို့ဖွင့်တဲ့ သံစဉ်တွေကို ကျွန်မက ဂရုမစိုက်ဘဲ ကျွန်မမှုတ်လက်စ တေးသွားကိုသာ ဆက်မှုတ်နေခဲ့ရင် နားထောင်ရတာ အဆင်ပြေမယ် မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ပြောင်းဖွင့်တဲ့ သံစဉ်တွေကို ကျွန်မ နားစွင့်နေဖို့ လိုတယ်။ ဟော၊ အခု သူတို့ဖွင့်နေတဲ့ သီချင်းဆိုရင် Classic တစ်ခုကို အသွင်ပြောင်းထားတာ´ ပြောနေရင်း ပုလွေကို ကောက်ကိုင်ကာ တေးသွားအချို့ ထွက်ကျလာသည်။ Tunnel နံရံကြောင့် ပုလွေသံသည် ပြင်ပမှာလို နုနွဲ့မနေဘဲ လိုဏ်သံပေါက်ကာ Theaterထဲမှ ဖန်တီးမှုတစ်ခုလို ဖြစ်နေသည်။
`ဒီနေရာမှာ Echo Effect ရှိနေတာတော့ အတော်ကောင်းတာပါပဲ။ ရှင် သူတို့ကို နောက်ခံဩခက်စထြာအနေနဲ့ သုံးပြီး တေးသွား ဖန်တီးလို့ ရတာပေါ့´
`သူတို့ကို ဘက်ဂရောင်းထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ ကျွန်မက သူတို့တေးသွားမှာ ဟာမိုနီလိုက်သလိုမျိုး ဖြည့်ပေးတာပါ။ သူတို့က အဓိက တေးသွားပါ။ Echo Effect ရှိတာတော့ အမှန်ပေါ့။ ဒီနေရာကိုယ်တိုင်က ပုလွေတစ်ချောင်းရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးရှိနေတယ်လေ။ သူ့ရဲ့ တိုးလျိုပေါက်ပွင့်နေတဲ့ အဆုံးနှစ်ဖက်ရယ်၊ တိုက်ခတ်နေကျ လေကြောင်းရယ်ဟာ ကျွန်မရဲ့ ပုလွေသံအတွက် Speaker လိုမျိုး ဖြည့်ပေးနေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်မ ဒီမှာ သက်သောင့်သက်သာ သံစုံတီးဝိုင်းလိုမျိုး Perform လို့ရတာပေါ့။ ညနေ ၃ နာရီလောက်အထိ ကျွန်မ ရှိနေဦးမှာ။ ရှင် ဒီနေရာကို အမြဲလာလေ့ ရှိသလား။ Orchard မှာလည်း Tunnel တစ်ခု ရှိတယ်လေ။ အဲဒီမှာဆိုရင် ရှင် လူတော်တော်များများရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကို ခံစားရမှာ။´- အမျိုးသမီးက ရေဗူးထဲမှ ရေကို တစ်ကျိုက်မော့သောက်သည်။
`ကျွန်မ Orchard ကို ရောက်ခဲပါတယ်။ ဒီအနီးတ၀ိုက်မှာ ကျွန်မရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် Site ရှိပါတယ်။ အခု ကျွန်မရဲ့ နေ့လည်စာ Break ပါ။ ကျွန်မရဲ့ Safety Shoes ကို သတိထားမိမှာပေါ့။ အချိန် အများကြီး မရပေမယ့် ဒီနေရာလေးက သာယာလို့ ခဏလာကြည့်တာပါ။ ရှင် ဒီနေရာမှာ လာပြီး လေ့ကျင့်တာသက်သက်ပဲလား။ ဒါမှမဟုတ် ရှင်ကိုယ်တိုင် တေးသွားတွေကို ဖန်တီးနေတာရော မဟုတ်ဘူးလား´
`တကယ်တော့ ဘီသိုဗင်တို့လို ကြီးမြတ်တဲ့ ဂီတသမားတွေမှာတောင် Practicing Time က Performing Time ထက် အများကြီး ပိုများတယ်ရှင့်။ သူတို့တွေဟာ လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ပဲ schore တွေရေးကြ၊ တေးသွားတွေ ဖန်တီးခဲ့ကြတာ။ တကယ့် အံ့မခန်းပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တွေပေါ့။ ကျွန်မအတွက် ဒီနေရာဟာ လေ့ကျင့်တဲ့နေရာ သက်သက်ထက် အများကြီး ပိုပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ရှာဖွေတွေ့ရှိလာတာတွေ အများကြီးပဲလေ။ ကျွန်မ တီးဝိုင်းအတွက် ဖျော်ဖြေတာမဟုတ်ရင် ဒီကိုလာပြီး အခုလို လေ့ကျင့်နေလေ့ရှိပါတယ်။ မနေ့ကဆို ဒီပြတိုက်မှာ တရုတ်အင်ပါယာသမိုင်းကြောင်း ပြပွဲတစ်ခုရှိလို့ သူတို့တွေ ရှေးတရုတ်သီချင်းကြီးတွေဖွင့်ကြတယ်။ ကျွန်မအတွက် အတော် အခက်တွေ့ခဲ့ရသေးတယ်။ ဒီနေ့တော့ သူတို့တွေ ဂျပ်ဇ်နဲ့ ပေါ့ပ်ကို တစ်လှည့်စီလို ဖွင့်နေကြလေရဲ့။ ဟော- ခုဖွင့်တဲ့ သီချင်းဆိုရင် ရှင်သိမယ်ထင်တယ်´- တေးသွားသည် ကပွဲတစ်ခုမှာလို ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်မ မသိပါ။ အမျိုးသမီး၏ ပုလွေသံသည် ရှေးအင်္ဂလိပ်ကားများတွင် ပါတတ်သော အသံတွန့်၍ ဟစ်၍ ဆိုတတ်သည့် အဆိုတော်တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေသည်။
`ရှင် ဒီလိုမျိုးလည်း ရှင့်ပုလွေနဲ့ သီချင်းဆိုတယ်နော်။ ဟုတ်လား´
`အချိန်အတော်များများမှာ ကျွန်မ အဖြည့်သံစဉ်တွေပဲ ဖန်တီးတတ်ပါတယ်။ ခု ပြီးသွားတဲ့ သံစဉ်မှာတော့ ကျွန်မ သီချင်းလိုက်ဆိုနေမိတာ ဟုတ်တယ်။ တစ်ပုဒ်လုံး မဆိုနိုင်ပေမယ့် ဒီလိုမျိုး အလှည့်အပြောင်းတွေက အခိုက်အတန့်တချို့ကို ပိုပြီး မြူးကြွစေတယ်။ အသက်ဝင်စေတယ် ဆိုရမလား။ Tunnel ရဲ့ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ တေးသံ နှစ်မျိုး ထွက်လာရင်တော့ တကယ့်ကို ဗရုတ်သုက္ခပါပဲလေ။ သူတို့တွေဟာ တစ်သံနဲ့ တစ်သံ လိုက်ဖက်ညီအောင်တော့ ကြိုးစားကြပုံပါပဲ။ ကျွန်မအတွက်တော့ အတော့်ကို ကြီးတဲ့ စိန်ခေါ်မှုမျိုးပါ။ ရှင် အဲဒီလို အခြေအနေမျိုး ကြုံတွေ့နိုင်မယ်လို့ ကျွန်မ အာမ, မခံနိုင်ပေမယ့် ညနေပိုင်းလောက်ဆိုရင် သူတို့ဖွင့်တဲ့ တေးသွားတွေက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ အမှန်ပါပဲ။´
`ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်မအဲဒီအချိန်အထိ ရှိမနေနိုင်တာတော့ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ ခု ကျွန်မရဲ့ နေ့လည်အားလပ်ချိန်လေးက ကုန်တော့မှာမို့ပါ။ ဂီတ သံစဉ်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ် စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ၊ အပန်းပြေစရာပါပဲ။ ရှင် အဆင်ပြေပါစေ´
`ရှင့်အတွက် စိတ်ချမ်းမြေ့ရသလို ကျွန်မအတွက်လည်း ပျော်ရွှင်စရာပါပဲလေ။ ရှင်လည်း အဆင်ပြေပါစေ။ ဂွတ်ဘိုင်´
Moral of the story: : ကြိုက်သလို ယူဆပါ။ ယူဆသလို ရရှိပါသည်။ ကျွန်မကတော့ လက်ရှိဖြစ်နေသော အခြေအနေကို သံစဉ်ညီညွတ်အောင် မတီးခတ်နိုင်သော ရွာဆော်မောင်းကွဲသံကြီးများကို ကြားယောင်နေပါသည်။
Posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ, ဟိုဟိုဒီဒီ	| Tagged education, Expectation, future, Life, strength |5Comments
April 24, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့ပြီးသည့်အခါ ဘက်ပေါင်းစုံက ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကြရပါသည်။ ကျွန်မကတော့ ကိုယ်နှင့် နီးစပ်ရာ ပညာရေး အကြောင်း တစ်ခုပဲ နည်းနည်းပါးပါး လေကန်ချင်ပါ၏။
1992-93 နှစ်များဆီက ဧရာဝတီတိုင်းတွင် လူ သိန်းနှင့်ချီ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ဟသာင်္တခရိုင်မှ င၀န်မြစ်ကမ်းထိန်း-ထိန်ငူတာ ကျိုးခြင်း။ ဂြိုဟ်တုသတင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပြီး UNICEF (ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေ) လို၊ ICRC (နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီ) လို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက အကူအညီတွေ လက်ကမ်းလာကြချိန် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟသာင်္တခရိုင်တစ်ခုလုံးက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားလုံး အရေးပေါ် တာဝန်တွေ ယူကြရသည်။ အဲဒီအချိန်ကာလ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား အခေါ်အဝေါ်များက ‘ရ၀တ၊ မ၀တ၊ ခ၀တ၊ တ၀တ”။ ထွေ/အုပ်က စာရွက်စာတမ်းထိန်းသိမ်းရေးဘ၀ရောက်ကာ တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းများက အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန် အပြည့်အ၀ ထမ်းဆောင်နေကြချိန်။
င၀န်မြစ်ရေ ၀ါကြန့်ကြန့်က ဒေါနှင့် မာန်နှင့် စီးနေသည်။ လောလောလတ်လတ် လူစုမိရာ ရွာတည်နေကြရသော Survivor များ ကုန်းမို့ရာ မှာ တဲတွေထိုးနေကြရင်း မျက်စိတစ်မှိတ်၊ လျှပ်တစ်ပြက်စာ သေကွဲ၊ရှင်ကွဲ လောကဓံ ဒဏ်ချက်များစွာ။ ဆန်စက်တွေ တာကျိုးသည့် ရေလုံးထဲ ပါသွားသောကြောင့် လတ်တလော ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှ ဆုံးရှုံးကာ လူမွဲဘ၀ ရောက်သွားကြရသူများကလည်း မနည်း။ The Day After Tomorrow ဆိုသည့် ဇာတ်ကားကို ကြည့်မိသည့်အခါ အဲဒီတာကျိုးတုန်းက ရေလုံးကြီးကို မြင်ယောင်မိသည်။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ထုကြီးထည်ကြီးဖြင့် ရေထုကြီး ကိုယ့်အနားရောက်လာသည်ကို ကိုယ်တွေ့ကြုံကြရသော ကောက်စိုက်သူများ၊ ရွာထဲကို ဘယ်ကမှန်းမသိ ရေတွေ တစ်ရိပ်ရိပ် တိုးဝင်လာသည်ကို ကြောက်ကြောက်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းရင်း မိသားစု အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်သူတို့က မရှား။ မြစ်ရိုးတလျှောက် တာပေါင်ကို လူသွားလမ်းထားတတ်သော ဒေသဖြစ်သည့်အလျောက် ကုန်းလမ်းက အလိုအလျောက် ပြတ်တောက်သွားလေပြီ။
ကျောင်းမှာ အတန်းထဲက သူငယ်ချင်းတော်တော်များများ ကျောင်းလာ မတက်နိုင်ကြတော့။ သူတို့ရွာတွေ ရေ၀င်နေသည်တဲ့။ မူလတန်းကျောင်း အတော်များများ ပိတ်လိုက်ရသည်။ ကျောင်းပါ ပျောက်သည့်ရွာလည်း ပျောက်။ ကျောင်းသားတင်မက၊ မိဘတွေနှင့် ဆရာတွေပါ ဒုက္ခကိုယ်စီတွေ့နေကြရသည့် ကာလ။ ICRC က အရေးပေါ် အ၀တ်အထည်၊ ဆေးဝါးနှင့် အမိုးအကာ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ဝေငှနိုင်ရန် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားက ကူညီပါမည်တဲ့။ အလွန်ကျေးဇူးတင်စရာ။ တစ်မြို့နယ်လုံးမှ ၀န်ထမ်းများကို တာဝန်တွေ ခွဲလိုက်သည်။ အိမ်အောက်မှာ ရေရောက်နေလို့ ဒုက္ခသည်စာရင်း ၀င်မည်မကြံလေနှင့်။ Duty is duty. ။ ဒီလိုနှင့် မြစ်ရိုးတလျှောက်မှ ရွာများ အနောက်ရိုးမဘက်ကို ရွှေ့ကြရသည်။ UNICEF က ရွှေ့သွားသော ရွာများအတွက် စာသင်ကျောင်းနှင့် စာရေးကိရိယာများ ထောက်ပံ့မည်။ လောလောဆယ် စာသင်ကြားဆဲ ကျောင်းသားများထံ စာရေးကိရိယာများ ပထမအဆင့် ဖြန့်ဝေသည်။ အောင်မြင်ပါသည်။ ဥက္ကဌကတော့ ‘မတန်မရာတွေ သွားဖြန့်နေရအောင် ဘယ်သူက ဘာခွင့်ပြုလို့ ဝေရသလဲ၊ အားလုံးပြန်သိမ်း’ ဟု ရာဇမာန်ရှသည့်အတွက် နောက်တစ်နေ့ အရပ်ထဲ လော်နှင့် လှည့်ကာ အော်ပြီး ပြန်သိမ်းရသည်။ အရပ်ရပ်နေပြည်တော် ကြားလို့မှ မလျော်ပါဘူး ဆိုကာ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများက ၀ိုင်း ဖြောင်းဖြတော့မှ ‘စာရင်းနဲ့ အင်းနဲ့ စနစ်တကျ ဖြန့်ဝေစေ’ ဆိုပြီး ဖြစ်သွားသည်။
တာကျိုးသည့် ရေများ ကျသွားပြီးသောအခါ လယ်အချို့ ပြန်စိုက်ကြသည်။ မြစ်ရေ ဆိုးဆိုးရွားရွား မထိလိုက်သော နေရာများပေါ့။ ဂြိုဟ်ဆိုးတို့သည် အဖေါ်အပေါင်းနှင့်မှ ပျော်ပုံရသည်။ စပါးပင်ဖျက်သော (ပုရစ်နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်) ပိုးကောင်များစွာ ကျသည်။ ပိုးကောင်နှိမ်နင်းရေးအတွက် ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းပေါင်းစုံ စစ်ဆင်ရေး ထွက်ကြရပြန်သည်။ ကျောင်းသားတို့ကလည်း ကျောင်းမှာ ဖင်မြဲအောင် မနေရနိုင်။ မိဘလယ်ထဲ၊ စက်လှေထဲ သူတို့လေးတွေ ရောက်ကုန်ကြရသည်။ ပြန်ဆောက်နေသော ကျောင်းဆောင်များအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား၊ ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ကျောင်းသား မိဘဟူသော ဆူးမျိုးစုံကြားညပ်နေရသည့် ‘ဘူးသီး’ ကျောင်းအုပ်ကြီးများမှာ UNICEF ကို ‘ယူနှိပ်စက်-အိုင်စိတ်ညစ်’ ဟု ထုတ်ညည်းဖြစ်ကြရသည် အထိ။ ဒီလောက် အရှည်ကြီးပြောပြီးကာမှ နိုင်ငံတကာ အကူအညီကို နှိပ်စက်သည် ထင်စရာလားဟု အပြစ်တင်ချင်ကြပါမည်။ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားက နိုင်ငံတကာကို ဘယ်သို့ သဘောထားသည်ကို သိသောသူများက နားလည်စာနာနိုင်ကောင်းပါ၏။
နာဂစ်မွှေပြီးသောအခါ ကျန်ခဲ့သည့် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကို ယခုထိ နည်းမျိုးစုံနှင့် ကုစားနေကြဆဲ။ နာဂစ်ကို ကံစမ်းမဲပေါက်ကြသူများဘ၀မှာ နာတာရှည်ဝေဒနာပေါင်းစုံ ၀င်ရောက်နှိပ်စက်နေပြီးသား လူမမာတစ်ယောက်အတွက် ဆေးခန်းသွားနေစဉ် သစ်ကိုင်းခြောက် ကိုယ့်အပေါ်ကျိုးကျသည့်အဖြစ်မျိုးပါပဲ။ ကျွန်မမှာတော့ မုန်တိုင်းအပြီး ရက်များမကြာမီမှာပင် ကျွန်းပေါက်စနပေါ် သောင်လာတင်ခဲ့ရသည့်အတွက် ကာယကံရှင်တစ်ပိုင်း၊ တာဝန်မဲ့တစ်ပိုင်းဘ၀ကို အရှင်လတ်လတ်ရောက်သွားရပါတော့သည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှ တစ်ဆင့် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံစားခဲ့ကြရသော ကလေးငယ်များ၏ ပညာရေးအတွက် ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်သည်ဆိုသောအခါ You-နှိပ်စက် တို့၊ I စိတ်ညစ်တို့ကို ပြန်သတိရမိသေးသည်။ ကိုယ်လှူချင်သည့်တိုင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပါဝင်နေကြရမည့်သူများ၏ စိတ်ဒုက္ခ၊ ကိုယ်ဒုက္ခတို့ကို ထည့်တွေးရပြန်သည်။
သူငယ်ချင်းတို့၏ အစီအစဉ်မှာ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ပညာဆက်လက်သင်ယူရန် အခက်အခဲတွေ့ကြုံနေကြရသော မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကလေးများအတွက် လစဉ် ထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကလေးတစ်ဦးချင်းစီ၏ နောက်ခံအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းချုပ်သိနိုင်ပြီး ကိုယ်ထောက်ပံ့မည့်ကလေးကို ရွေးချယ်နိုင်သလို ထောက်ပံ့သူမရှိသေးသည့်ကလေးများအနက် အလှည့်ကျကလေးအတွက်လည်း ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ လစဉ် ကိုယ့်မိသားစုကိုယ် ပြန်ပို့နေသည့်ငွေပမာဏကိုလည်း မထိခိုက်၊ ကိုယ်သုံးစွဲနေကျပမာဏထက်လည်း ထူး မလျော့၊ ပညာသင်လိုသူ ကလေးငယ်တစ်ဦးအတွက် အကူအပံ့ဖြစ်စေနိုင်သော အစီအစဉ်ဖြစ်၍ နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းများ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်မှာ ၂၀၀၈-၀၉ ပညာသင်နှစ်ပင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ဓါတ်ပုံများကို ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါသည်။ (သူတို့လေးတွေ ရေးထားသော စာလုံးပေါင်း မှားမှား၊ ပဲပင်ပေါက်စာလေးများကို မြင်သည့်အခါ အစ်မဖြစ်သူ မူလတန်းပြ ဆရာမ၏ တပည့်များကို သတိရသည်။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ အသီးအနှံ(၃)မျိုးကို ရေးပါဆိုတော့ – ‘ကျောက်ဖလုံသီး’ ဆိုပဲ။ သင်နှစ်သက်သော ဟင်း (၃)မျိုးဆိုပြန်တော့ -`ခွေးသား´တဲ့။ ပဲခူးတိုင်း၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အတွင်းက မြောက်မကွေရွာကလေးမှာ ၃ နှစ်နီးပါး တာဝန်ကျခဲ့သူ အစ်မက လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ် ပြောတတ်ရှာသည်။ )
စာသင်နှစ်ပြီးဆုံးချိန်တွင် နောက်နှစ်အတွက် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးရန်နှင့် အလှူရှင်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုရန် ဖိတ်စာလေးရောက်လာခဲ့ပါသည်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထိုနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော အလှူရှင် ဂုဏ်ပြုပွဲကို ကိုယ်တိုင် မတက်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း Gmail Inbox မှ ဖိတ်စာကိုမြင်မိတိုင်း တစ်ချိန်က `တိုင်းဧရာဝတီ၊ မြို့ရေကြည်၊ လူမည် xxxx၊ ကုန်မှ အေး ´ဟု ရွတ်တွတ်တွတ် ရေရွတ်ရင်း တစ်မြို့နယ်လုံးက ကျောင်းရှိသမျှကို စက်ဘီးတစ်တန်၊ ကုန်းကျောင်းတစ်တန်၊ လှေတစ်တန်သွားကာ စစ်ဆေးတတ်သော လက်ထောက်မြို့နယ်ပညာရေးမှူး ဆရာချစ် ကို သတိရနေမိပါသည်။ ဆရာချစ်ရေ…………… ခု နာဂစ်အပြီးမှာ ဘယ်လိုများ ရေရွတ်နေဦးမလဲ သိချင်စမ်းပါဘိ။
(စာကြွင်း။ ။ ပမာဏ မများလှပေမယ့် ယမမင်းထံ အစစ်ခံရင် ပထမဆုံး စိတ်ထဲပေါ်လာမယ့် ကောင်းမှုအဖြစ် တွေးမိလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာပါ။ ကလေးတို့ရဲ့ အနာဂတ် သန်စွမ်းတောက်ပနိုင်ပါစေ။)
Posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ, ဟိုဟိုဒီဒီ, shared information	| Tagged co-operative, Development, education, individualism, myanmar youths, strength | Leaveacomment
April 4, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
April Fool အတွက် မျိုးစုံ လုပ်သမျှထဲမှာ ဒီတစ်ခုကတော့ အလွန်ဆုံးပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ စံချိန်တင် နှိပ်စက်နိုင်သူများပါ။ ဒါကို အရူးလုပ်တယ်လို့ မယူဆချင်ပေမယ့် ဒီနေ့မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်ရတယ်လို့ဗျာ။ ကို ဒီဘီကြီးတို့ သတိဝီရိယ အပြည့်နဲ့ လည်တာတောင် ခံလိုက်ရတာ ရှိသေးတာပဲဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်ထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတွေးစရာရှိတာက တက္ကသိုလ်က လုပ်တဲ့ ဧပရယ်ဖူးလ် ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပေါ့နော်။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တိုင်းမ် သတင်းစာက နောက်တာလားမှ မသိတာ။ အပြည့်အစုံ ဖတ်ချင်သူများ ကိုညီညီ(သံလွင်) ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးကိုသာ သွားဖတ်ကြပါ။ အဲဒီမှာ ရက်စွဲ ထည့်မရေးထားပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ 1st April ဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ကြောင်း မှတ်မိမယ်ဆိုရင် ဒီလို သံသယ၀င်ဖို့ လို/မလို စဉ်းစားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီနှစ် ကျောင်းလျှောက်ရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။ ကိုဒီဘီကြီးရေးတာကို ဖတ်မိတာကြောင့်လည်း နည်းနည်းပိုပြီး စိတ်ပါလာတာ။ အခုလို နောက်ပြောင်တာမျိုးတော့ မကြုံပါရစေနဲ့ …… ဘုရား…. ဘုရား……။
Posted in ဟိုဟိုဒီဒီ	| Tagged Benifits, Development, education |4Comments
February 2, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
MIT, Dreams and Ways
USA က MIT ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ အဝေးကြီးမှ ဟိုးအဝေးကြီးက ကြယ်တစ်ပွင့်ပါပဲ။ ကိုယ့်တက္ကသိုလ်က သင်လိုက်တဲ့ ပညာတွေတောင် ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် ပျောက်တော့မယ်မှန်းမသိအောင် ကျွန်မလည်း အမေ့ပျောက်ခံပြီး တောမရောက်၊ တောင်မရောက် အလုပ်တွေနဲ့ ခါနာမှန်ရေး ကြိုးစားနေရတယ်လေ။ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့ စကားနဲ့ပြောရရင် ရူးပြားနိမ်းဟေး-ခါနာနိမ်းဟေး ပေါ့။ ခက်တာက ကိုယ်သင်ချင်လွန်းလို့ ကြိုးစားပမ်းစားသင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ မေ့ပျောက်ကုန်ရင် ဆိုပြီးတွေးမိတိုင်း ရင်ထဲ နာနာကျင်ကျင် ဖြစ်တာပဲ။ တစ်ခါတစ်ခါတော့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာလေးတွေ ရှာဖွေ ဖတ်ရင်း အင်တာနက်ဆိုတာကြီးကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်တိုင်းလည်း ကိုယ်နားမလည်တာတွေ များလာရင် စိတ်ဓါတ်က ကျချင်လာပါရော။ ကိုယ် လေ့လာတာလည်း ဘယ်အဆင့်ရောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိ၊ ကိုယ်နိုင်လောက်၏/မနိုင်လောက်၏လည်း မသိ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Self-study တော်ပုံများ 😦
အဲဒါနဲ့ အဝေးသင်ပညာရေးကို သတိရသွားပါတယ်။ ကျွန်မသင်ပေးခဲ့ရတဲ့ guide တပည့်လေးတွေထဲမှာ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်အထိ ပါပါတယ်။ နယ်မြို့လေးဖြစ်တဲ့အတွက် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ကို အားပေးကြတဲ့ မိဘတွေက အတော်များပါတယ်။ ဒါတောင် ကျွန်မတို့မြို့လေးက တက္ကသိုလ်ရှိတဲ့ မြို့နဲ့ ၉ မိုင်ပဲ ဝေးပါတယ်။ လိုင်းကား နေ့စဉ်ရှိပြီး ၀န်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ ဈေးသည်/ ကုန်သည်တွေ ပုံမှန်သုံးစွဲနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မနက်သွား/ညနေပြန် နေ့ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခရီးစရိတ်နဲ့ အခြား အထွေထွေအသုံးစရိတ်ရယ်၊ ကျောင်းမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ ခံစားဖို့ရယ်ဆိုတော့ စရိတ်က မသေးလှဘူးပေါ့လေ။ ဒီတော့ အဆောင်နေကျောင်းသား/ကျောင်းသူဆိုပြီး တစ်စု ထပ်ထွက်လာပါတယ်။အဲဒီကျပြန်တော့ အဆောင်စားရိတ်နဲ့ မိဘရင်ခွင်က ခွါရတဲ့အခါ တခြား၊တခြားသော အကြောင်းအရာတွေက ရှိလာပြန်ရော။ ဒါနဲ့ပဲ သာမန် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားရှာဖွေနေရတဲ့ မိဘတွေက အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ကို မျက်စိကျသွားပါတယ်။ ကျောင်းပြီးရင်တော့ ဘွဲ့ရပညာတတ်ဆိုတဲ့ စာရင်းထဲ ၀င်မှာပဲကိုး။
အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ဆိုတာကြီး တက်ပါပြီဆိုတော့မှ မိဘတွေ မသိခဲ့တဲ့ အနီးကပ်ဆိုတာကြီး ပါလာပါလေရော။ စာစဉ်ဖိုး၊ လက်ချာတိပ်ခွေဖိုး ဆိုတာကတော့ မိဘတွေကို ရှင်းပြလို့ရနိုင်ပေမယ့် ကျူရှင်ယူရ၊ အနီးကပ်တက်ရတဲ့ စားရိတ်က နေ့ကျောင်းတက်နေတဲ့လူတွေလောက်ကို ထွက်လာပါတယ်။ စာမေးပွဲဆိုလည်း နေ့ကျောင်းသားတွေထက် အများကြီး ပိုတင်းကျပ်တယ်ဆိုပြီး ညည်းညူကြပါတယ်။ ဆရာ/ဆရာမတွေအနေနဲ့လည်း အဝေးသင်ကျောင်းသားတွေကို သေသေချာချာ မတတ်မှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ပိုပြီး ကရိကထ ခံရပါတယ်။ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ‘ပညာရေး၊ ဝေးသည်မရှိ’ ဆိုတာက ပေးလာတဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေက မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ဘွဲ့ရစာရင်းနဲ့ မမျှအောင်ပါပဲ။
အဓိကအချက်က ရလာတဲ့ ဘွဲ့ကို လိုချင်တာလား၊ အဲဒီပညာရေးက သင်ပေးလာမယ့် ပညာကိုလိုချင်တာလားဆိုတာပါ။ တစ်ချို့ကလေးတွေများ သနားစရာကောင်းလောက်အောင်ကို အပင်ပန်းခံ ကြိုးစားကြပါတယ်။ သူတို့ကို မေးကြည့်တော့ ဒီကျောင်းပြီးလို့ လယ်ထဲ ကိုင်းထဲ ပြန်မဆင်းဘဲ တခြားလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါ အဝေးသင်ဘွဲ့မို့ သူများထက် မျက်နှာငယ်ရပါတယ်တဲ့။ အသုံးမကျတာ သူများထက်ဆိုးနေမှာစိုးလို့ ကိုယ့်အသိစိတ်လေးနဲ့ကိုယ် ကြိုးစားကြတာပါတဲ့။ ကျွန်မဖြင့် ကိုယ့်ကျောင်းနားက ရွာမှာ အဆောင်သွားနေပြီး ပျော်ပျော်ကြီး တက္ကသိုလ် တက်ရတာတောင် သူတို့ကို ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် အားနာမိသွားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပြောပြမိရင် ဩဘာပေးလောက်ရဲ့- ကြောင်ပါ့ ဆိုပြီးလေ။
သူတို့ တန်ဖိုးထားတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့ ဘ၀လေးတွေမှာ အများကြီးမဟုတ်တောင် အတော်ကို ကွာခြားကြပါတယ်။ လူရိုသေရှင်ရိုသေ၊ မိတ်ဆက်လို့ကောင်းအောင်၊ အလုပ်လျှောက်လို့ ဘောင်ဝင်အောင် သင်ခဲ့ကြသူများဟာ ရောက်လေရာမှာ ရပ်သွားတာ များပါတယ်။ ဆက်ပြီးတိုးတက်ဖို့ (ဆိုလိုတာက လေ့လာသင်ယူပြီး တိုးတက်ဖို့) ကြိုးစားလက်စရှိတဲ့ ဘွဲ့ထက် ပညာကို လိုချင်သူများသာ အနှေးနဲ့ အမြန် တိုးတက်လာကြတာပါ။ ကျွန်မတို့ ကျောင်းပြီးခါစ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အားနည်းချက်အရ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ တကယ် အသုံးချရင်း ဆက်လက် လေ့လာသွားမှသာ ကိုယ်သိထားတဲ့ အတတ်ပညာ၊ အသိပညာတွေကို ထပ်ပြီး ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာပါ။ ဒီလိုနဲ့ လုပ်ငန်းချိန်ပြင်ပ သင်တန်းတွေဆီမှာ မဆုံးနိုင်တဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ပေါ်လာပါတယ်။ တချို့တချို့သော သူများကလည်း self-study ကို ညွှန်းကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ လမ်းခွဲအများကြီးမှာ သိုးပျောက်ကို ရှာကြသလိုပေါ့။ ကိုယ် ဘယ်လမ်းလိုက်ရပါ့ ဆိုပြီး ထွေပြားသွားတတ်တာလည်း ရှိသလို မြေပုံ မပြည့်စုံ၊ လမ်းစရိတ်မရှိလို့ ဆက်မသွားဖြစ်တာတွေလည်း self-study ရဲ့ ဘေးထွက် အာနိသင်တွေ ကြုံတွေ့လာရတတ်ပါတယ်။
အခု Mysteryzillion Forum မှာ mmlegend ညွှန်းထားတဲ့ MIT က ပံ့ပိုးတဲ့ Opencourseware ဆိုတာ သွားတွေ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ MIT က ပေးတဲ့ ဘွဲ့ကိုမှ လိုချင်ပါတယ်ဆိုရင် တက်ရမယ့် အချိန်၊ ငွေ၊ အခြားအခြားသော ကန့်သတ်ချက်တွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး သွားတက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ လေ့လာမှုနဲ့ကိုယ် ဘယ်လို မွမ်းမံမလဲ၊ ဘယ်လို ပြန်နွှေးမလဲ၊ ဘယ်လို ကြိုးစားမလဲဆိုရင် သူတို့ပံ့ပိုးထားတဲ့ lecture notes, learning aids, video lectures, recession တွေကို အစီအစဉ်ချပြီး လေ့လာလို့ရပါပြီ။ ဒီလို အလွတ်လေ့လာမှုတွေအတွက် MIT မှာ register လုပ်စရာ၊ Fees သွင်းစရာ မလိုသလို diploma, certificate, degree တွေ ပေးမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပြီး သိုးပျောက်ရှာဖို့အတွက် ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ မြေပုံတစ်ချပ်ရသလိုပဲ ဖြစ်မှာပါ။
အခု ကျွန်မ MIT ရဲ့ အဝေးသင်ကျောင်းသား လုပ်ကြည့်နေပါပြီ။ သူက ပေးမယ့် ဘွဲ့ ဆိုတာထက် ကိုယ်ကျောင်းတက်တုန်းက ဒါတွေဟာ ဘာတွေပါလိမ့်ဆိုတဲ့ ယောင်တီးယောင်နဘ၀ကို ပြန်ဖြည့်ဆည်းချင်တာနဲ့ကို MIT ရဲ့ Virtual ကျောင်းသား လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ ရောက်တတ်ရာရာတွေ လျှောက်သွားခဲ့တဲ့ လမ်းတွေမှာ ရခဲ့တဲ့ အခြားအခြားသော မြေပုံဖတ်နည်းများကိုလည်း အသုံးချခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျွန်မလျှောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းတွေကို အလကားမဖြစ်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်အားပေးရင်း၊ အခု လေ့လာသင်ယူမှု လမ်းကြောင်းပေါ် ထော့နဲ့ထော့နဲ့ တက်လျှောက်ပြန်ပြီပေါ့ရှင်။ 🙂
Posted in shared information	| Tagged Benifits, Development, education, Expectation, Internet, myanmar youths, Opencourseware, strength |4Comments
Here is what U.S government defines the #Rohingyas, wikileaks.org/cable/2002/10/… 8 years ago
Evidence: #Bengali #Rohingya terrorists try to set #Rakhine people's houses on fire. Photo: Eleven (Sittwe - 12 Jun) http://t.co/N0yVDcwA 8 years ago
RT @SEAYSS: Myanmar: Understanding the Rakhine-Rohingya conflict | SEA Youth Say So fb.me/18t8pJGCR 8 years ago
RT @YingAungKham: #Rohingya use foto from Indonesia to fake as foto from #Rakhine #Myanmar as if they are being killed by Rakhine. lies ... 8 years ago
RT @nangnyi: Dear World Media, if you are very concerned abt Human Rights, take all those #rohingya into your countries.. =( 8 years ago